Bobongolo cap ny tsindrona
Satroka ambony kapila
Tavoahangy tavoahangy fanasan-damba
Booth Isa: 14 B61 Manasa anao hitsidika ny CHINAPLAS 2021 Manasa anao am-pitiavana izahay / ny orinasanao hitsidika ny trano heva ato aminay CHINAPLAS 2021, izay hatao ny 13‐16 Mey 2021 ao amin'ny China Import & Export Fair Complex, Shenzhen, Guangdong PR China. Ny maha-vahininay, entranc ...
M3 traikefa momba ny molotra CAP
Izahay dia nanangona ny haavo farany avo lenta sy avo indrindra amin'ny famokarana bobongolo mafana any Chin. Ny angon-drakitra vita amin'ny vokatra miolakolaka dia vakin'ny CMM mba hiantohana ny fahamarinan'ny angona sy ny fahamarinan'ny vokatra bobongolo. Ny rano mivezivezy dia ampiana amin'ny tapany lehibe amin'ny famolavolana kofehy, amin'izay ...
M3 CAP MOLD PROFLE ORINASA
Mingsanfeng Cap Mould Co., Ltd natsangana tamin'ny volana Jona 1999, ny orinasa dia manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy amin'ny tsindrona satroka plastika. Miaraka amin'ny karazana kapila ambony tampoka, kapila ambony kapila, satroka tsy voaroaka, satroka injeniera-milina fiarovana, fanasana ranon-javatra, vatana tavoahangy kosmetika ary satroka sns ...
NO.22, Huatianbei 1st Road, Gaoxin IndustriaI Park (uiRongg), distrika shunde, Foshan City, Guangdong P.RChina